I-Ultrasonic Tank Agitators - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-Ultrasonic tank agitators angama-agitators mehendi. Ukuyaluka kwe-Ultrasonic kuxubanisa uketshezi nolunye uketshezi noma ama-solids ukwenza ngcono inqubo ye-kinetics ekwenziweni kwamakhemikhali, ukudla, okwenziwa emithi nasezimonyo. I-Hielscher Ultrasonics agitators ibanga ngosayizi kusuka kuma-agitators kwelebhu kuya kuma-tank tank agitators for batch noma ku-line.
Inhloso yokuphazamiseka kwethangi ngukuthuthuka kwenqubo yenetics. Ama-Ultrasonic tank agitators asiza izinqubo ezilandelayo:
Imvula & Ukuqedwa Kwemicimbi Eqinile Emanzini
Ukuhlakazeka & Ukuhlanganiswa Kwezinto ezisetshenzisweni zeLiidid, isb. Izihlanganisi zezimboni, ezentengiso noma zasendlini noma ezinye izinto zokuhlanza ugesi
emulsification, isib. ukuxubanisa iziphuzo ezimbili ezingenakuqhathaniswa noma ezicishe zifinyeleleke
I-Botanical Extraction, isb ioyili evela kumakhambi, amaqabunga noma izinongo
Ukuhlolwa kwamangqamuzana (isib. Ukuphazamiseka nokukhipha amaseli)
Ukuhlanza i-Particle Surface, isb. Ubuhlalu beglasi noma imidiya yokugaya
I-Particle Synthesis, isb. I-low-up-synthesis noma kwezulu
ukuphendula kwamakhemikhali & catalysis, isb. kuma-CSTRs (Ngokuqhubekayo Stirred Tank Reactors)
Ezinhlelweni eziningi, ama-agtrator tank agtrators anganciphisa isikhathi senqubo kakhulu. Isibonelo, esikhundleni sokufaka ama-botanicals amahora amaningi endaweni yokukhishwa kwamanzi abandayo, ukuyaluza nge-ultrasonication kunganciphisa isikhathi sokulungiswa kube imizuzu noma ngisho nemizuzwana. Ukungezwa kwama-ultrasonic probes kuma-batch reactors akho, kuyindlela elula yokunciphisa isikhathi senqubo nokwandisa amandla akho okukhiqiza ngempumelelo. Ngokwalokhu, ukuyaluza kwethangi le-ultrasonic kusiza ukuthuthukisa ukusebenza kanye nokunciphisa izindleko zokukhiqiza.
I-Ultrasonic Lab Agitators
Ama-agtrators we-Ultrasonic ayithuluzi elibalulekile ekucwaningweni nasekuthuthukisweni. Ngenkathi ukuvuselela okujwayelekile, kuvame ukudinga umthamo ophansi ophansi, ukuyaluza kwe-ultrasonic kungasetshenziswa kusuka ku-150 asL. I-Hielscher Ultrasonics yenza abahlanganisi abahlanganyeli be-ultract handheld kanye nama-homogenizer emi-agcinwe agxiliwe we-ulutions yezinqubo ezahlukahlukene. Ama-flowcell reactors ayatholakala kuwo wonke amadivayisi we-Hielscher ultrasonic.
Izimbangi Zezimboni Zezimboni
Ama-Hielscher agitators agxilisa uhla lwezinto ezinhlobonhlobo ekwenziweni kwemikhiqizo ewuketshezi, njengopende, uyinki, ukumbozwa kombala, izinamathiseli, noma i-grease lubricants. Ama-agizeli we-Hielscher agudli asukela kuma-watts angama-500 kuya kuma-kilowatts ayi-16 wamandla we-ultrasonic ngesiprofetho esisodwa se-ultrasonic. Ungasebenzisa ilungiselelo lamaphrosesa amaningi we-ultrasonic wamandla aphezulu okukhishwayo okuphelele we-ultrasonic.
I-Linear Scale-Up of Agitator Ikhono
Enye yezinzuzo ezibalulekile zama-Hielscher agitators agtrators over abavamile, bendabuko mehendi tank agitators isilinganiselo linear up ngokuphelele. Noma yimiphi imiphumela kusuka kumalebhu noma ngezinga lokushayiswa kokuphazamiseka kungalinganiswa ngokuqondile kunoma isiphi usayizi omkhulu.
Ukufakwa kwe-Agtrator Agitator
Ungabuyisela ama-agtrators we-ultrasonics asezimboni kuma-tank avele ashukumisiwe bese uwahlanganisa nezinye izinhlobo ze-tank-mixer. Ngenye indlela, ungafaka ama-phenog agraffic-in-line ngepompo yokuphinda uqalise kabusha umkhiqizo wakho ngokusebenzisa isihambisi se-ultrasonic. Imibhangqwana ye-Ultrasonication ayikho ukushisa emkhiqizweni. I-probe ye-ultrasonic idlulisa amandla emishini ngesimo sokudlidliza okusetshenziswayo, kuphela. Umxube we-ketshezi ungafudumeza ngenxa yokushayisana koketshezi lapho unyakaza.
I-Industrial Ultrasonic Agitator – I-UIP2000hdT – kwi-Mobile Lift Stand
I-Ultrasonic Agitator UP400St ku-Plank Tank for Extraction
Ukusebenziseka Kokulula Kwamatangi
Abavuseleli bohlobo lwe-Ultrasonic probe abanazimpawu zokushintshana. Ungakhweza i-probe flange kunoma iyiphi indlela, i-engela noma isikhundla esithini se-reactor noma kunoma yimuphi omunye umkhumbi. Ngakho-ke, i-probe efanayo ye-ultrasonic iyasebenziseka njenge-agitator ephezulu yokungena, i-agorator yokungena noma i-agitator engezansi yokungena. Ungakhweza ama-ultrasonics probes wokuphazamiseka kuma-reactor weglasi, amathangi ensimbi, amathangi angenasici, noma iziqukathi zepulasitiki, ezifana nama-IBC.
Ubukhulu besiphithiphithi namandla e-ultrasonic ahlanganiswe kuketshezi angahluka ngenombolo nosayizi weprosesa ye-ultrasonic nangokuphakama kokudlidliza kwe-ultrasonic. Lapho usebenzisa amaprosesa amaningi we-ultrasonic ethangini elilodwa, uphenyo ngalunye lungenziwa ngokuzimela.
Lapho usebenzisa i-tank yokuluka kwe-ultrasonic ukuxuba imikhiqizo ephezulu ye-viscosity efana namafutha okugcotshwa ngamafutha, izinamathiseli, ama-polymers, ama-resins noma upende inhlanganisela ye-ultrasonics ene-propellor agitator isiza ukukhiqiza imiphumela yenqubo eyengeziwe.
Ukuhlanza okulula Indawo Yezindawo Agitator Ezenziwe Ngayo
I-Ultrasonic agitator probes yenziwa ngeTitanium Ibanga lesi 5. Le Titanium iyinhlangano enamandla, engasindi futhi i-corrosion ukumelana ne-alloy. Amamitha we-probe ejwayelekile ahlukahluka kusuka ku-1mm kuya ku-40mm ngokusetshenziswa kwelebhu futhi kusuka kuma-40mm kuye kwangama-90mm kwabafundi beziteki zezimboni. Ngakho-ke ama-agtrators e-ultrasonic adinga amachweba wamathangi amancane, kuphela.
Ama-Ultrasonic tank agitators angahlanzwa kalula, ngoba abagqugquzeli be-Ultrasonic banamajometri alula we-symmetric alula kakhulu futhi akukho zimpawu ezijikelezayo, ezingavuza noma ziphele.
Ngenkambiso ye-Clean-In-Indawo (i-CIP), ama-prosesa we-ultrasonic angasiza ngokuhlanza okukhulu kwe-ultrasonic.
I-UIP2000hdT (2kW) yokwelashwa kwe-batch enkulu
Ukusethwa Kokuhlola Okutholakalayo kwe-Ultrasonic process Agitation
Uma ungathanda ukuthenga i-agitator ye-ultrasonic tank, sicela usebenzise ifomu elingezansi ukuxhumana nathi! Sizojabula ukuxoxa ngezidingo zakho zokuphazamiseka kwenqubo. Uyacelwa ukuthi unikeze eminye imininingwane mayelana nephrojekthi yakho, efana nevolumu elizocutshungulwa ngosuku, ukwakheka kwezinto ezibonakalayo nenhloso yenqubo. Ngokusekelwe kulolu lwazi, singakuthumela imininingwane nentengo yokusethwa kwethangi elifanele.
I-UP400St (400 Watts) i-tank agitator
Ngokuphazamiseka okulula ukusetshenziswa kwethangi, sincoma i-UP400St (400W, 24kHz) nge-sonotrode S24d22L2D (ububanzi obungu-22mm). Amanye ama-sonotrodes we-diode ayatholakala. Le homogenizer enamandla enamandla, iza nophenyo lokushisa kanye ne-othomathikhi ye-SD-Card protocoling. Idivaysi ye-UP400St ingasebenza amahora angama-24, izinsuku eziyi-7 ngesonto ngokuqhubekayo emandleni agcwele.
I-UIP1000hdT (1000 watts) tank agitator
I-Hielscher UIP1000hdT (1000W, 20kHz) ene-sonotrode CS4d40L4 (ububanzi obungu-40mm) inamandla amaningi, ingagijima ngamamaki aphezulu futhi icubungule amanani amakhulu. Iyunithi iza nophenyo lokushisa kanye ne-othomathikhi ye-SD-Card protocoling. Ama-sonotrodes amakhulu ubukhulu, ama-sonotrodes amade namafushane ayatholakala. Singakunika izesekeli ezidingekayo, njengokuma, ukulungiswa kwamandla, isikhuhlisi esinamandla esipholile noma isikejana sejekethi eboshwe nge-flange ekhuphukayo.
I-UIP4000hdT (4000 Watts) tank agitator
I-Hielscher UIP4000hdT (4000W, 20kHz) ene-sonotrode CS4d64L4 (ububanzi obungu-64mm) inamandla wokuhlanganisa amaningi ukuze kusetshenziswe amanani amakhulu kakhulu. Le yunithi ifaka phakathi i-probe lokushisa kanye ne-othomathikhi ye-SD-Card protocol. Amanye ama-sonotrodes ayatholakala. Singakunika izesekeli ezidingekayo, ezinjenge-mobile lift stand, i-chiller epholile enamandla noma isikejana se-batch esine-jacket enomshini obandayo.
Amaqiniso Okufanele Ukwazi Ngama-tank Tit
Kunezindlela ezahlukahlukene zokuguguleka nezinhlobo eziningana zemishini yokuguga. Lokhu kufaka phakathi:
I-Stirrers (ihange nogqozi bezititimu, ama-radial propellor agitators)
Ama-Turbine Agitators, ama-Pitch Blade Turbines
Amabha we-Magnetic Stir
Ama-femic tank agitators amaningi akha imvelo ephansi kakhulu yokuguguleka ngenxa yesivinini esilinganiselwe sokunyakaza kanye nokuntuleka kwe-cavitation. Ukuyaluza kwe-Ultrasonic kuyindlela ebukhali kakhulu yokuguga kwenqubo yemishini. Umzuzwana ngamunye, i-ultrasonication idala ukunyakaza okungaphezu kwama-20,000 emishini ku-ketshezi. Lokhu kuphumela ekuxubeni okukhulu namandla e-shear anamandla awusizo ekwakhiweni kwemikhiqizo eminingi yomkhiqizo. Ipropeller enama-blade amabili ibizodinga ukugijima ku-600,000 RPM ukufanisa imvamisa
Izicelo ze-Ultrasonic Tank Agitator
Ama-Ultrasonic tank agitators asebenza ezinhlotsheni ezahlukahlukene emhlabeni wonke, njengoku:
Ukudla Olamanzi nososo
upende, ezinengilazi, Ama-varnish, inks kanye Nemibala
I-Refresh Technology ne-Petrchemistry (isib. Desulfurization)
Umkhakha Wezimonyo (ukwenziwa kokhilimu namafutha amaningi)
Ezolimo (isib. Ukukhipha imbewu)
Imboni yezemithi (isib. Imigomo, okugcotshisiwe kanye nokugcoba)
Isithasiselo seBotanicals (isb. Nge-ultrasonic cell lysis)